ကိုယ်က သ​ဘောမ​ကောင်းတဲ့လူတစ်​ယောက်လို့ ​ပြောခံရတဲ့အခါမှာ Song Joong Ki တစ်​ယောက် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ
Song Joong Ki Insurance
By News BarPosted on December 17, 2021 January 6, 2022
မင်းသား Song Joong Ki ဟာ ကင်မရာ​ရှေ့မှာ မျက်နှာအမူအရာကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ အမှန်တကယ် တုန်လှုပ်သွားတဲ့ ပုံစံ​ကြောင့် လတ်တ​လောမှာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိ​နေပြန်ပါတယ်။ မကြာ​သေးခင်က ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက နာမည်ကြီး online community တစ်ခုဖြစ်တဲ့ theqoo မှာ “သူက သ​ဘော​ကောင်းတဲ့ လူတစ်​ယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ ကြားလိုက်ရတဲ့အခါ မျက်နှာအမူအရာကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Song Joong Ki” ဆိုတဲ့ ​ခေါင်းစဉ်နဲ့ post တစ်ခုကို netizen တစ်ဦးက တင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ post ကို တင်ထားတဲ့လူက “Song Joong-ki.ZIP” ဆိုတဲ့ Twitter account က ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြန်လည်မျှ​ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို​တော့ Twitter မှာ “210206 “Access! Movie World” ထုတ်လုပ်သူရဲ့ ​မှတ်ချက်​ကြောင့် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတဲ့ Song Joong Ki” ဆိုတဲ့ caption နဲ့ တင်ထားခဲ့တာပါ။
ထိုဗီဒီယိုဟာ Song Joong Ki တစ်​ယောက် SBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Access! Movie World” ကို ပါဝင်ရိုက်ကူးစဉ်ကဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာ သူဟာ “Space Sweepers” ရုပ်ရှင်ကားအ​ကြောင်း ​အ​မေးအ​ဖြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အင်တာဗျူးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ​​တော့ အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူက “အခု အင်တာဗျူးက​တော့ အကုန်ပြီးသွားပါပြီ။ မင်းသား (Song Joong Ki) က သ​ဘောမ​ကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်” လို့ အဆက်အစပ်မရှိ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။ မင်းသား Song Joong Ki လည်း ရုတ်တရက် သူ့နားသူမယုံနိုင်ဖြစ်သွားကာ ​ဒွိဟဖြစ်သွားပြီး “ဟင် ဘယ်​နေရာကလဲ” ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်သူကို ပြန်လည်​မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါ ထုတ်လုပ်သူကလည်း ခုနကအတိုင်းပဲ ထပ်​ပြောပြန်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် Song Joong Ki လည်း အ​တော်​လေး တုန်လှုပ်သွားပုံ​ပေါ်ကာ ​​ပျာယာခတ်သွားပြီး “ကျွန်​တော်ကလား? အာ..ဟုတ်ကဲ့။ ဘာလို့လဲ” ဆိုပြီး ဆက်မေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါကြမှ ထုတ်လုပ်သူက “ကျွန်မတို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အ​ခြေချ​နေရာယူသွားပြီလို့ ထင်တယ်” ဟုဆိုကာ အသည်းယားစရာ မှတ်ချက်ကို ​ပြောခဲ့ပါတယ်။ တကယ်​တော့ ထုတ်လုပ်သူဟာ အစတည်းက “Ahn-Chak-Ha-Da (အ​ခြေချ​နေရာယူတယ်)” ဆိုတဲ့ စကားကို ​ပြော​နေခဲ့တာပါ။
ဒါ​ပေမဲ့ “သ​ဘောမ​ကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အသံထွက်နဲ့တူ​နေတာ​ကြောင့် Song Joong Ki က အထင်လွဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး word play လုပ်တာ​​တွေဟာ fan sign ​တွေမှာပရိသတ်​တွေ​က သူတို့နှစ်သက်တဲ့ အနုပညာရှင်​တွေ ရင်ခုန်​​စေဖို့အတွက် ပြုလုပ်​နေကြဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှ Song Joong Ki ဟာ သ​ဘော​ပေါက်သွားပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ ရယ်​​မောကာ “ဒီအစီအစဉ်က အစတည်းက အဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးလား? ဒီလိုစကားကို ဘယ်လိုလုပ် ဒီ​လောက် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်​ပြောနိုင်ရတာလဲ?” ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါ​တော့တယ်။
တကယ်​တော့ “Access! Movie World” အစီအစဉ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူဟာ Song Joong Ki ကိုမှ မဟုတ်ပဲ သူတို့အစီအစဉ်ကို လာ​ရောက်တဲ့ တခြားမင်းသားမင်းသမီး၊သရုပ်​ဆောင်​တွေနဲ့ အင်တာဗျူးပြီးတိုင်းမှာ ဒီလိုလုပ်​နေကြဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး Song Joong Ki ရဲ့ မျက်နှာအမူအရာ ​ပြောင်းလဲသွားပုံကို ​တွေ့လိုက်ရတဲ့ netizen ​တွေက​တော့ “ဘာလဲဟ။ ဘာလို့ ငါက ရင်ခုန်​နေရတာလဲ?” ၊ “သူက ဒွိဟဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ​​တောင် ​ချော​နေတုန်းပဲ” စသဖြင့် မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
Photo : Instagram, theqoo
Posted in Celebrity News, Korean CelebrityTagged K-Drama Story
Previous post ယခုနှစ်အတွင်း Google ရဲ့ ရှာ​ဖွေခံရမှုအများဆုံး အာရှလူမျိုးအ​ယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ K-Pop Idol များ
Next post ကြယ်ပွင့်တွေဟာ အကူအညီမပါဘဲလည်း လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ကြောင်း RM နဲ့ SUGA တို့ အခိုင်အမာပြောဆို